Vaovao - Inona no fitafiana miaro ny masoandro? Inona no fitsaboana UPF?
Raha mpandehandeha amoron-dranomasina mavitrika ianao, mpitsangantsangana na zaza an-drano, mety ho taraina ianao noho ny filentehan'ny masoandro amin'ny masoandro rehefa mihodina ianao. Rehefa dinihina tokoa, dia asaina mametaka takelaka fanaovan-jiro isaky ny adiny roa na mahery - indrindra raha miala sasatra ianao, milomano na mifoka matetika. Ary na dia tsy hamaha ny olanao rehetra aza izany - satria asaina ampiasaina amin'ny fandrindrana amin'ny tabilao masoandro - azonao atao ve ny mampahafantatra anao ny akanjo fiarovana ny masoandro?
Huh? Inona no maha samy hafa azy fa tsy ny akanjo taloha ihany, hoy ianao?
Ho an'ireo vao manomboka, hoy i Alok Vij, MD, dermatology, fa rehefa miresaka momba ny lamba dia ampiasao ny teny hoe "UPF", izay midika ho fiarovana amin'ny ultraviolet. Ary amin'ny tabilao masoandro, ampiasao ny teny hoe "SPF," na ilay anton-javatra fiarovana ny masoandro mahazatra kokoa. “Ny ankamaroan'ny lobaka vita amin'ny landihazo dia manome anao mitovy amin'ny UPF amin'ny 5 rehefa anaovanao azy,” hoy ny fanazavany.
“Ny ankamaroan'ny lamba anaovantsika dia tenona malalaka izay mamela ny hazavana hita maso ary hipaka amin'ny hodintsika. Miaraka amin'ny akanjo arovan'ny UPF dia tsy mitovy ny tenona ary matetika no vita amin'ny lamba manokana hanamboarana sakana amin'ny taratry ny masoandro. ”
Ny jiro UV dia afaka miditra amin'ny lavaka bitika ao anaty tenona amin'ny akanjo mahazatra na afaka mandeha mivantana amin'ny lobaka miloko maivana aza. Miaraka amin'ny akanjo UPF, lehibe kokoa ny sakana, manome anao fiarovana bebe kokoa amin'ny masoandro. Mazava ho azy, ny akanjo miaraka amin'ny UPF dia miaro ny faritra amin'ny vatanao izay rakotry ny lamba voatsabo.
Ny ankabeazan'ny fitafiana miaro ny masoandro dia toa toy ny fitafiana na fanatanjahan-tena mavitrika ary misy lobaka, leggings ary satroka isan-karazany Ary noho ny isan'ny kofehy avo kokoa dia matetika no mahatsiaro ho milay kokoa noho ny T-shirt mahazatra anao.